प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्सको खुद नाफा २४%ले बढ्यो – प्रति सेयर आम्दानी कति? - Business Awaj
Home Insurance प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्सको खुद नाफा २४%ले बढ्यो – प्रति सेयर आम्दानी कति?
प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्सको खुद नाफा २४%ले बढ्यो – प्रति सेयर आम्दानी कति?
प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को दोश्रो त्रैमासिक वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यस त्रैमासमा १९ करोड ३६ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवदीमा १५ करोड ६० लाख कमाएको थियो । तुलनाको अवधिमा खुद नाफा २४.१ प्रतिशतले बढेको छ ।
यस अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब खुद वीमाशुल्क आर्जन गरेको छ भने गत आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ५८ करोड खुद वीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । यस अवधिमा खुद वीमाशुल्क २७ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । कम्पनीले लगानी, कर्जा तथा अन्य आयबाट ५५ करोड २५ लाख र वीमालेख धितो कर्जाबाट ६ करोड ३४ लाख अर्जन गरेको छ ।
यस अवधिमा कम्पनीले ४९ करोड ६१ लाख खुद दावी भुक्तानी गरेको छ । त्यसैगरी अभिकर्ता कमिशन बापत २३ करोड २ लाख र व्यवस्थापन खर्च बापत २६ करोड ६७ लाख खर्च गरेको छ । भुक्तानी हुन बाँकी दावी रकम १ करोड ३७ लाख रहेको छ ।
यस कम्पनीको हाल सम्म कुल कायम रहेको वीमालेखको संख्या २ लाख ५४ हजार ९ सय ७६ रहेको छ ।
हाल कम्पनीको चुक्तापुँजी २ अर्ब ४१ करोड रहेको छ भने जगेडा कोषमा ६१ करोड ४२ लाख रहेको छ । कम्पनीको जिवन बीमा कोषमा १३ अर्ब ९ करोड रहेको छ भने महाविपत्ती कोषमा १४ करोड ६७ लाख रहेको छ ।
कम्पनीले दीर्घकालिन लगानी तथा कर्जामा १२ अर्ब ८१ कारोड र बीमालेख धितो कर्जामा १ अर्ब ३६ करोड परिचालन गरेको छ ।
कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी १६.०२ रहेको छ भने नेटवर्थ १३१.६१ रहेको छ । त्यसैगरी मुल्य आम्दानी अनुपात ५०.६१ गुणा रहेको छ ।
Previous articleमेरो माइक्रोफाइनान्सको खुद नाफा ७१.६४%ले बृद्धि
Next articleआइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको खुद नाफा १२५%ले बृद्धि